Izithethi zesakhelo seSistem yaMandla, okanye indlela yokudibanisa ubugcisa netekhnoloji | Iindaba zeGajethi
Izithethi zesakhelo se-Energy Sistem, okanye indlela yokudibanisa ubugcisa kunye netekhnoloji
UJose Rubio | | Izithethi, Umfanekiso kunye nesandi
Umvelisi weSpanish Energy Sistem namhlanje uzise uluhlu olutsha lwe izandisi-lizwi ekhaya umnxeba Izithethi zesakhelo. Njengoko igama layo libonisa, ifemi yetekhnoloji imanyanise umhlaba wobugcisa kunye nesandi, ukudibanisa ezintathu izithethi ezinamandla ngetekhnoloji Indawo engenantambo ye-Stereo ezintathu Imizobo yohlelo olunomda yenziwe ngamagcisa adumileyo ohlukeneyo kubugcisa baseSpain.
Ngamandla Inkqubo yesandi yestereo 50W yamandla, siya kuba nesandi esisemgangathweni, kwaye engenazingcingo ngokupheleleyoNgokubhekiselele kukutya kunye nolawulo. Ukukhupha isandi kuphathisiwe Izithethi ezibini ze-10W midrange amandla nganye, kunye nye i-30 W subwoofer yamandla, ukudibanisa izibonelelo zokuhamba rhoqo kwaye ke sisasaza umculo wethu ngokuthembeka okukhulu.
Amagama abo ngo I-East Beach, ngu-Antonyo Marest; IFlamingo, Ngu-Mónica Jimeno; kunye neHlathi, NguSamuel Cano. Zonke ezi nguqulelo ziyafana ngaphakathi. Ibandakanya ibhetri ebonelela nge Ukuzimela kweeyure ezingama-20 ukuya kumthamo oqhelekileyo ophakathi, kwaye unayo Unxibelelwano lweBluetooth ukuze sikwazi ukulawula umsindo kwi-smartphone yethu, ithebhulethi okanye nasiphi na esinye isixhobo seBluetooth esinaso. Ngale nto, sinokonwabela umculo nakweyiphi na ikona yekhaya lethu. Ukongeza, kubandakanya irediyo ye-FM, Iinkcukacha zokuba yonke imihla edlulayo ilahlekile kwizixhobo ezitsha ezisungulwe kwintengiso.
Mhlawumbi eyona nto ibaluleke kakhulu kolu ngcelele yitekhnoloji eyiyo Isitiriyo esingenazingcingo, eya kusivumela dlala umxholo wethu ngaxeshanye kwizithethi ezibini zesakhelo ukuya kuthi ga kwi-10 yeemitha zoluhlu. Oku kuyasivumela Izithethi ezibini zesakhelo zivakala ngaxeshanye kwigumbi elinye, ngelixa bephethe uxanduva lokuhombisa igumbi ngendlela esithanda ngayo.
Kodwa banonxibelelwano ngakumbi ukongeza kwiBluetooth. Kwisakhelo sayo, ii-canvases zibandakanya iphaneli esecaleni enonxibelelwano olwahlukileyo ukudlala umculo wethu kwimemori i-USB okanye ikhadi microSD ukuya kuthi ga kwi-128GB amandla, ukuguquguquka xa uphulaphule iingoma zethu esizithandayo kuqinisekisiwe.
Igcisa ngalinye likwazile ukutolika kunye nokuqulatha imodeli nganye yeSithethi seSakhelo esitsha ngendlela yobuqu. Umzekelo, eUmzobi waseAlicante UAntonyo Marest Yifumane ukukhuthazwa komsebenzi wakhe e-East Beach kunxweme lweMeditera, indawo eyambona ekhula, edlulisa i- imibala eqhelekileyo yeMeditera njengesibhakabhaka esifudumeleyo okanye luhlaza wolwandle.
Endaweni yomsebenzi de UMonica Jimeno ivakalisa amandla ayo imibala ye-fluorine kwimvelaphi emhlophe, ebonisa iintaka ezingaqhelekanga ezinemibala eqaqambileyo, ezifuna dlulisa ulonwabo kunye nokukhululwa kweemvakalelo. Ekugqibeleni, USamuel Cano ibonisa ubukhulu be ngaphakathi kwehlathi laseSwitzerland, Ngomfanekiso wendalo, uxolo nentlalontle.
Ezi mveliso zintathu zomsindo, ngokukodwa kwi-Energy Sistemukongeza kwi khuthaza ubugcisa besizwe ngokukwazi ukuyisa kwiindonga zekhaya lethu ngendlela elula nefumanekayo, bayakwazi ukudibanisa obu bugcisa kunye netekhnoloji, begcwalisa indawo kwintengiso eyayingachazwanga ngaphambili, ukudibanisa ukusetyenziswa komculo kunye nobugcisa ekhaya.
Iimodeli ezintathu zothotho lweSakhelo sikaSomlomo Ziya kufumaneka kwiiyunithi ezinqunyelwe ngexabiso le- € 139 ukusuka nge-15 ka-Epreli elandelayo, nangona ungayigcina ukusuka kulo mzuzu kwi Isistim ye-Energy Sistem, Ukuthunyelwa ngesiqhelo njengayo nayiphi na enye iodolo ebekwe kwiwebhusayithi yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Izithethi zesakhelo se-Energy Sistem, okanye indlela yokudibanisa ubugcisa kunye netekhnoloji
Uyifomatha njani ithebhulethi ye-Android